Ifufe ole kpụrụ na 2016? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Otto hụrụ site na satịlaịtị.
Ọ dị ka ụbọchị ahụ agaghị abịa, mana ọ dabara na ihe niile rutere: Officelọ Ọrụ Mba Na-ahụ Maka Ihu Igwe (ONAMET), nke Dominican Republic, na-ejedebe oge ajọ ifufe na Atlantic. Ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ha enweghị ike ịmalite ọzọ na ụbọchị ma ọ bụ izu na-esote, mana ihe puru omume nke ahụ na-adị obere.
Ọ bụ oge oke ifufe siri ike, nke kpatara oke mbibi n'ihi idei mmiri na ifufe siri ike nke dakwasịrị ọtụtụ obodo na obodo dị na America. Ka anyi nyochaa oke ifufe nke hibere n'oge ihe ịrụ ụka adịghị ya bụ oge ajọ ifufe nke siri ike ichefu.
1 Hurricane Alex, n'etiti Jenụwarị 12 na 15
2 Ajọ Ifufe Earl, August 2-6
3 Ajọ Ifufe Gastón, n’etiti August 22 na Septemba 3
4 Ajọ Ifufe Hermine, n'etiti August 28 na September 3
5 Ajọ Ifufe Matthew, n'etiti Septemba 28 na Ọktọba 10
6 Ajọ Ifufe Nicole, n’etiti Ọktoba 4 na 18
7 Ajọ Ifufe Otto, n'etiti November 20 na 27
Hurricane Alex, n'etiti Jenụwarị 12 na 15
Ọ malitere na Jenụwarị, ihe dị ka ọnwa ise tupu mmalite oge nke oge. Ọ bụ ajọ ifufe nke mbụ kemgbe 1955 malitere na ọnwa mbụ nke afọ. Na Jenụwarị 14, 2016, Ajọ ifufe Alex malitere na-emetụta Azores Islands na Bermuda na ifufe nke ruru 140km / h, nke ahụ bụ, ndị nwere ajọ ifufe 1.
Na-akpata ọnwụ mmadụ na Portugal.
Ajọ Ifufe Earl, August 2-6
N'ọnwa Ọgọstụ, ka mmiri ahụ na-ekpo ọkụ, ajọ ifufe ọhụrụ malitere, na-emetụta Yucatán, Mexico, Puerto Rico na Hispaniola. Oke ikuku ya kachasị ọsọ ruru ọsọ nke 140km / h, si otú a bụrụ ajọ ifufe 1.
Ihe nbibi kpatara ihe ruru $ 100 nde, na hapụrụ ọnwụ 64, 52 naanị na Mexico.
Ajọ Ifufe Gastón, n’etiti August 22 na Septemba 3
Gastón bụ ajọ ifufe mbụ nke oge a nwere ifufe ruo 195km / h, si otú a rute ụdị 3 na Saffir-Simpson n'ọtụtụ na Azores. N'agbanyeghị ihe niile, ọ nweghị mmebi ma ọ bụ mfu a ga-akwa ụta.
Ajọ Ifufe Hermine, n'etiti August 28 na September 3
Ka Gastón na-agbaze, Hermine malitere na Oke Osimiri Caribbean, ajọ ifufe ruru otu 1. Oke ikuku ikuku kacha efe na 130km / h, na-emetụta Cuba, Bahamas, Dominican Republic na ndịda ọdịda anyanwụ United States.
Ihe nbibi kpatara ihe karịrị $ 300 nde, na hapụrụ ọnwụ 5 na U.S.
Ajọ Ifufe Matthew, n'etiti Septemba 28 na Ọktọba 10
Ka ọ na-erule na njedebe nke ọnwa Septemba na etiti ọnwa Ọktoba ụwa lekwasịrị anya n'Oké Osimiri Atlantik. N'ebe ahụ, e hiwere Hurricane Matthew, nke kachasị ike n'oge a ruru ụdị 5 n'ihi ifufe na-adịgide adịgide nke ruru 260km / h. O metụtara Venezuela, Florida, Cuba, Dominican Republic, Colombia, Lesser Antilles, tụmadị Haiti.
O mebiri ihe onwunwe nke ruru ijeri dollar 10.58, na hapụrụ ọnwụ 1710, 1655 naanị na Haiti.
Ajọ Ifufe Nicole, n’etiti Ọktoba 4 na 18
N'ọnwa Ọktọba anyị ga-ekwu maka Nicole, ajọ ifufe nke Atọ 4 dara na North Atlantic n'akụkụ Bermuda. Oke ikuku ikuku kachasị edere bụ 215km / hma dabara nke ọma, ọ dịghị mmebi ma ọ bụ ọnwụ na-akwa ụta.
Ajọ Ifufe Otto, n'etiti November 20 na 27
Ka ọ na-erule njedebe nke November Otto guzobere na Central America. Site n’ifufe nke ruru 180km / h, ọ ruru ụdị 3, wee metụta Colombia, Panama, Costa Rica na Nicaragua.
Ebibi ihe onwunwe bara uru karịa $ 8 nde, na hapụrụ ọnwụ 17.
N'ihi ya, ngụkọta nke ajọ ifufe 7 kpụrụ n'afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ifufe ole kpụrụ na 2016?